“Dhibaatada haatan heysata Real Madrid sabab uma ahan muuqaal caawiyaha garsoorka ee VAR” – Modrić – Gool FM
“Dhibaatada haatan heysata Real Madrid sabab uma ahan muuqaal caawiyaha garsoorka ee VAR” – Modrić
(La Liga) 07 Jan 2019. Xidiga khadka dhexe kooxda Real Madrid ee Luka Modrić ayaa xaqiijiyay in dib u dhaca ku yimid xiliyadii lasoo dhaafay Los Blancos aysan sabab u ahayn muuqaal caawiyaha garsoorka ee VAR, balse ay sabab u tahay waxyaabo kale.
Real Madrid ayaa markale guuldaro niyad jab ah kala kulantay kulankii xalay ee Real Sociedad, kadib markii loogu awood sheegtay 2-0, kulankooda 18-aad ee horyaalka La Liga ee xili ciyaareedkan.
Kadib guuldaradan soo gaartay Real Madrid ayaa waxay shaki weyn galisay in xili ciyaareedkan ay u dagaalami karto ku guuleysiga horyaalka La Liga, maadaama farqiga u dhexeeya iyada iyo kooxda hogaamineysa horyaalka ee Barcelona uu noqday ilaa iyo 10 dhibcood.
Wargeyska “Marca” ayaa wuxuu soo xigtay wareysi uu bixiyay xidiga khadka dhexe kooxda Real Madrid ee Luka Modrić kadib guuldaradii ay kala kulmeen Real Sociedad.
“Qaar badan ee ka mid ah kooxda kuma jiraan xaaladooda caadiga ah”.
“Waa inaad si daacad ah u hadashaa, arinta ma ahan nasiib xumo, waxaan abuuri karnaa fursado badan, balse kubada ma galeyso shabaqa, waxaa jira sababo badan awgood aysan wax walba ugu soconin jihada saxda ah anaga ahaan”.
“Garsoorka, nagama dhigin inaan bixino qaab ciyaareed xun, dhibaatada na heysato sabab uma ahan garsoorka ama muuqaal caawiyaha garsoorka ee VAR, inkastoo aysan na caawinin, balse waxaa ina heysta dhibaatooyin kale”.
“Garsooraha ayaa ii sheegay in muuqaal caawiyaha garsoorka ee VAR uu xaqiijiyay in aysan aheyn rigoore, waxaana u maleynayaa inay tahay wax lala yaabo inaysan ku celinin xaaladan in ka badan hal mar si loo hubiyo, gudaha Spain dhamaantood waxay ka careysan yihiin VAR”.